Nezvedu - Nezve Propars E-Export
Propars ndeyepasi rose e-export software inotungamirwa muTurkey iyo inogadzira e-commerce mhinduro dzemabhizinesi.
Yakavambwa muna 2013 mukati memutumbi weIstanbul University Technopolis, Propars yakabatsira kushanduko yedhijitari yezviuru zvemabhizinesi. Ndichiri kugonesa mabhizinesi kutonga zvese zvavanoda zvehunyanzvi mu-e-commerce, akashanda seyepamutemo e-invoice/e-archive service provider.
Nekubatanidzwa kweEbay.com kwakapedzwa muna 2016, zita rekutanga repamutemo rakatorwa mumunda we e-export. Kuziva kubatanidzwa kweAmazon.com muna 2017, Propar yakasarudzwa sePilot Project naTürk Telekom mugore rimwe chete.
Pakazosvika 2019, yakabatanidzwawo munyika makumi maviri nenhanhatu kusanganisira Amazon neEbay, uye yakapinda muAmazon SPN runyorwa muna 26. Propars, yekutanga uye yega software muTurkey inopa kubatana kwakazara nemisika yepasirese, iri kuwedzera musika mutsva wepamhepo kune portfolio yayo mazuva ese. Iyo inowedzera kuwedzera iyo yekutengesa network yainopa kune vashandisi vayo ine inotungamira pasirese uye yemuno misika misika.
Mabhizinesi muTurkey anoshandisa Propars kusvika parizvino atumira mamirioni emirairo kunyika zana nenomwe kuburikidza neanopfuura makumi maviri akasiyana misika yepasirese. Nekuda kweiyo yepasirese uye yepamusoro software chimiro, vatengesi vekuEurope neAmerica vakatangawo kusarudza Propars.
Kubvumira chero bhizinesi kutengesa kupasi rese vachishandisa mutauro wavo wekuzvarwa chete, Propars inosangana nezvinodiwa zvetekinoroji zvinodiwa mu-e-commerce kubva pane imwechete uye inomira kunze mumusika wepasi rose.
Propars yatora musimboti wekudhijita maSME uye kuvhura iwo kupasirese. Yakakoka maSME ku-e-export uye kugadzira yakawedzera kukosha kwehupfumi hwenyika, nemazana e-e-commerce / e-export dzidziso dzaakapa mahara kusvika zvino.
Iyo inosvika maSME akawanda uye akawanda zuva rega rega, pamwe nevakawanda vakakosha bhizinesi vanobatana, kunyanya mabhanga anotungamira eTurkey.
Chii chiri muPropar?
Bhizinesi rinoshandisa Propar rinogona kuzadzisa zvese zvarinoda mu e-commerce uye e-export maitiro kubva panzvimbo imwe. Iwo makuru maficha aunokwanisa kuwana muPropar ndeaya anotevera;
Easy marketplace management ine batch transactions,
Kugona kubata ese misika kubva pane imwechete skrini,
Otomatiki stock tracking,
Odha manejimendi peji uye e-invoice/e-archive sevhisi
Masevhisi ekushandura otomatiki
Mukana wekuwana mishandirapamwe yevashandi vebhizinesi.